रेनाशाको निर्देशनमा ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ बन्ने | THE CINEMA TIMES
NepalNews Author:	The Cinema Times - May 12, 2017
रेनाशाको निर्देशनमा ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ बन्ने
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । ठुलोपर्दामा कोरियोग्राफी मार्फत छुट्टै पहिचान बनाईसकेकी रेनाशा राईले अब फिल्म निर्देशन गर्ने भएकी छन् । शुक्रबार राजधानीमा एक प्रेसभेटघाट आयोजना गरेर राईको डेब्यु निर्देशन रहने ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’को बारेमा जानकारी दिइयो ।
रेनाशाले निर्देशन गर्ने यो फिल्ममा साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहका साथै नयाँ कलाकार धिरज मगर, सरुक ताम्राकार, बिबेक लिम्बु र सुनिशा बजगाईं लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ । ५३ दिनको छायांकन अवधी राखेको फिल्मलाई असार २ देखि साउन २३ गतेसम्म नेपालसंगै युकेमा खिचिनेछ ।
आईकोर फिल्मसको व्यानरमा निर्माण गरिने रोमान्टिक ड्रामामा प्रभु एसजेबी राना र प्रज्वल एसजेबी रानाको लगानी रहनेछ । फिल्ममा टिसुजिल कर्मचार्य, हर्कुलस बस्नेत, र स्वप्न सुमनको संगीत रहने बताइएको छ । फिल्मको लागी अहिले राजन खतिवडाले कलाकारहरुलाई अभिनयको प्रशिक्षण दिईरहेका छन् ।
नेपाली फिल्ममा गरेको नृत्य निर्देशनबाट दर्शकले दिएको हौसला र मायाले आफुले पहिलो पटक फिल्म निर्देशनमा हात हालेको रेनाशाले बताइन । साथै ‘इन्टु मिन्टु’ आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट रहेको पनी बताइन । जसरी कोरियोग्राफीमा राईले उत्कृष्ट काम गरेकी थिइन्, त्यसरीनै यो फिल्ममा राम्रो काम गरेर दर्शकको मन जित्ने आशा व्यक्त गरिन ।
Tags:renasha rai, samragyee rl shah
रेनाशाको निर्देशनमा ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ बन्ने0out of5based on0ratings.0user reviews.
अस्ट्रेलियामा ‘लभ लभ लभ’
अफ्ठेरो कसलाई ? रणवीर, दिपिका, रनबिर या दर्शक ?